Maitiro Ehutsinye, Akapaza Subdomain Akawana Yangu Yekutanga Domain Mune Dambudziko neGoogle! | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 30, 2018 Muvhuro, June 17, 2019 Douglas Karr
Kana sevhisi nyowani ikarova musika wandinoda kuyedza, ini ndinowanzo saina ndoipa muyedzo kumhanya. Kune akawanda mapuratifomu, chikamu cheiyoboardboard kunongedzera subdomain kune yavo server kuti iwe ugone kumhanyisa chikuva pane yako subdomain. Kwemakore, ini ndawedzera gumi nemaviri e subdomains ayo akanongedzera kumabasa akasiyana. Kana ini ndikabvisa sevhisi, ini kazhinji ndanga ndisingatombonetseke nekuchenesa iyo CNAME mune angu DNS marongero.
Kusvika manheru ano!
Pandakatarisa email yangu manheru ano, ndakawana meseji iyo yaityisa heck kunze kwangu. Yakanga iri yambiro kubva kuGoogle Search Console kuti saiti yangu yakabiwa uye ini ndaifanirwa kukumbira kuongororwa kuti ndione saiti yangu yagara mumhedzisiro yekutsvaga. Ini ndinogashira ese epamoyo madomaini pane premium yekutambira maakaundi, saka kuti nditi ndainetseka ndeyekunyepedzera. Ini ndanga ndichivhunduka.
Heino email yandakatambira:
Nyatso tarisa ma URL akanyorwa neGoogle Search Console, uye uchaona kuti hapana kana rimwe rawo raive padandemutande rangu. Ivo vaive pane subdomain inonzi hombororo. Iyi ndeimwe yemayedzo subdomains andakashandisa kune akawanda masevhisi akasiyana.
Yangu Saiti Yangu Yakabiwa?
Kwete. Iyo subdomain yanga ichinongedzera kune wechitatu-bato saiti iyo ini kana ini zvandisina kana simba pamusoro payo zvekare. Yakaonekwa pandakavhara account ipapo; havana kumbobvisa yavo yekupinda domain. Izvi zvaireva kuti yangu subdomain yaive ichiri kushanda ichinongedzera kune yavo saiti. Kana yavo saiti yakanga yabvutwa, zvakazoita kuti zviite kunge ndakanga ndabiwa. Chakatonyanya kushamisa ndechekuti Google Tsvaga Console haina hanya kuti yaive yakashata subdomain, ivo vachiri vakagadzirira kudhonza yangu yakachena, yepamoyo saiti kunze kwekutsvaga mhinduro!
Ouch! Handina kumbofunga kuti vangambove panjodzi.
Ndakapfuura neyangu DNS marongero ndokubvisa chero risingashandiswi CNAME kana A Record iyo yakanongedzera kune chero sevhisi yandakanga ndisiri kushandisa zvekare. Kusanganisira hombororo, Ehe saizvozvo.
Ini ndakamirira kudzamara zvirongwa zvangu zveDNS zvaparadzirwa kutenderera pawebhu kuti ndive nechokwadi cheiyo hombororo subdomain haana kugadzirisa kune chero kupi zvakare.
Ndakaita a backlink odhita kushandisa Semrush kuona kuti vabiridzi havana kuedza kuwedzera masimba eiyo subdomain. Ivo vanga vasina ... asi dai vaive, ndingadai ndakagovanisa imwe neimwe yemadomaini kana zvinongedzo kuburikidza neGoogle Search Console.
Ndakaendesa a kuongorora chikumbiro pakarepo kuburikidza neGoogle Search Console.
Ndiri kutarisira kuti haizotora nguva uye kuona kwangu kwekutsvaga hakukuvadzi.
Ungadzivisa Sei Izvi?
Ini ndinokurudzira kuti iwe uongorore ako marongero eDNS kanenge kamwe chete pamwedzi kuti uve nechokwadi chekuti uri kubvisa chero subdomains yausingashandise. Ndiri kupfuura nemamwe madomaini angu izvozvi. Ini zvakare ndinokurudzira kuti iwe utenge yakaparadzaniswa dura kune yechitatu-bato masevhisi pane kuisa yako yepakati, organic maseru munzvimbo ine njodzi. Nenzira iyi, kana subdomain ikabvarurwa haizokanganisa yako yekutanga domain's yekutsvaga masimba uye kuoneka.
Tags: rekodhicnamezvinyorwa zvinokanganisaDNSinotongwagoogle yekutsvaga konihackedhacked zvemukatikuongorora chikumbirosubdomain
Dhizaini Yemaitiro e2019: Asymmetry, Jarring Colors, uye kuwedzeredza Zvikamu